March 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သွားဖုံးရောဂါ အပိုင်း ၁ သွားဖုံးရောဂါသည် အများအားဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးသူများတွင် အဖြစ်များလေ့ရှိပါသည်။ သွားဖုံးရောဂါ (သွားမြစ်ဝန်းကျင်ရောဂါ) သည် သွားဖုံးသား၊ သွားဖုံးအရိုးနှင့် သွားကိုထိန်းပေးသော သွားမြစ်ပတ်မြှေး တို့တွင် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါ ဖြစ်သည်။ သွားဖုံးရောဂါ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း သွားဖုံးရောဂါဖြစ်ရခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ…
သားမွေးပြွန်ထည့်ကွင်း စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ရာဘာကွင်းလေး တစ်ကွင်းက သန္ဓေတားနိုင်စွမ်းရှိတာကို သိကြလား။ ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်လိုတားပေးတာလဲ။ ဒီကွင်းလေးဟာ မဟော်မုန်းတွေပါဝင်ပြီး တစ်စိမ့်စိမ့်ထွက်ရှိပေးတဲ့အတွက် သားဥကြွေခြင်းကို တားပေးတယ်။ ကွင်းထည့်ထားတဲ့ တစ်ဝိုက်မှာလည်း ချွဲမြှေးတွေ ထူစေပြီး သုတ်ပိုးများ သားအိမ်အတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားမြစ်ပေးပြီး ကိုယ်ဝန်မရအောင်…
ဦးထုပ်ကလေးဆောင်ထားပေး၊ ကိုယ်ဝန်မရရေး (သားအိမ်ခေါင်းစွပ်) ပဋိသန္ဓေတားဆီးတဲ့ နည်းတွေထဲက သုတ်ပိုးနဲ့ သားဥမတွေ့အောင် တားနည်းနောက်တစ်မျိုးကတော့ သားအိမ်ခေါင်းလေးမှာ ဦးထုပ်ကလေးစွပ်ထားတဲ့ နည်းပါပဲ။ သားအိမ်ခေါင်းစွပ်ဆိုတာကတော့ ခပ်ပျော့ပျော့ silicone သို့ latex နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခွက် ပုံသဏ္ဍာန် ပစ္စည်းလေးပါ။ သားအိမ်ခေါင်းအဝမှာ စွပ်ပေးထားခြင်းဖြင့် သားအိမ်အတွင်း…
ကလေး ဂျီကြတဲ့ နွေဦး ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့နောက် ရာသီဥတုတွေပြင်းထန်လာပါတယ်။ လူကြီးတွေတောင်ရာသီဥတုဓာတ်ကိုမနည်းအံတုနေရချိန်မှာ ကလေးငယ်လေးတွေရော နွေနေပူမှာအဆင်ပြေနိုင်ဖို့ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ တစ်ချို့နည်းလမ်းလေးတွေက မေမေရောကလေးအတွက်ပါ သိထားတော့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပါတယ်။ နွေရာသီမှာ ကလေးတွေဟာရေဓာတ်ပိုလိုပါတယ်။ နို့တိုက်တဲ့ကလေးငယ်ဆို ချွေးထွက်တာနဲ့ ကာမိအောင် အမေနို့ကို အကြိမ်ရေများများပိုတိုက်ပေးပါ။ ဖြည့်စွက်စာကျွေးတဲ့ကလေးဆိုလည်း…
ညဘက် ခြေထောက်ညောင်းကိုက်တတ်တဲ့သားသားမီးမီးတွေ သားသားမီးမီးတချို့မှာ တစ်ခါတစ်လေခြေထောက်ညောင်းလို့၊ ခြေထောက်နာလို့ ဆိုပြီး မေမေဖေဖေတွေကိုနှိပ်ပေးဖို့အပူကပ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ မေမေဖေဖေတို့ကလည်း ငါ့သားသမီးလေး အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ခြေထောက်ညောင်းတတ်နေရန်ကောဆိုပြီးစိတ်ပူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ စိုးရိမ်စရာရောဂါလား၊ သာမာန်ဖြစ်ရိုးထုံးစံလားဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်နော်။ ကလေးငယ်ကြီးထွားချိန်တွင်ဖြစ်တန်သောနာကျင်မှု (Growing Pain) ဒီဝေဒနာဟာ အသက် ၄နှစ်ကနေ ၁၂နှစ်အရွယ်ကြားမှာဖြစ်တတ်တဲ့…
တီးတိုးတိုင်ပင် ဖေ့ဘုတ်သုံးနေရင်း messenger မှ စာဝင်လာသည်….. မတွေ့ဖြစ်တာကြာနေတဲ့ အသိအမတစ်ယောက်….. အမ:ညီမလေး အားလားဟင်? အမတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့…. ကျွန်မ: ရတယ်အမ…အားပါတယ်….မေးပါ.. အမ: ညီမလေး ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့နော်… ညီမလေးမပြောဘူးဆိုတာတော့ သိပါတယ်… ဒါပေမယ့်က ဒီတိုင်းပြောထားတာပါ … ကျွန်မ:…
ပြောတိုင်းပေါက်မြောက် အောင်မြင်ပါစေ “NA ရောက်တယ် ဆရာရေ။ unconscious နဲဲ့။” ( ဒီနေရာမှာ အနည်းငယ် ရှင်းပြပါရစေ။ NA ဆိုတာက လူနာအသစ်ရောက်တယ် လို့ အတိုခေါ်ပြောတာဖြစ်ပြီး unconscious ဆိုတာကတော့ သတိလစ်ပြီးရောက်လာတယ်ပေါ့။) ဒီအသံမျိုးက ဂျူတီကျတဲ့ ညတိုင်းမှာ…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကလေးလှုပ်ခြင်း ရင်သွေးလေးလွယ်ထားရတဲ့ မိခင်လောင်းတိုင်းဟာ တစ်ချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးလှုပ်ရှားမှုကို ကြည်နူးစွာခံစားသိရှိရမှာပါ။ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုလေးတွေဟာ မေမေတို့ကို တသိမ့်သိမ့်ကြည်နူးစေသလို ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်း အရေးကြီးလှတဲ့ အချက်များစွာရှိနေပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ကလေးလှုပ်တာကိုစသိနိုင်မလဲ? ဒါကတော့ မိခင်လောင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ်မူတည်ပြီးအတိအကျပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အခုမှသားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့မေမေဆို ကိုယ်ဝန် ၁၈ ပတ်ကနေ အပတ် ၂၀…